Kenya oo ka wal-walsan rabshad ka dhalata doorashada soo socota | stn radio	Thursday, November 27th, 2014	Home
Kenya oo ka wal-walsan rabshad ka dhalata doorashada soo socota
Jan 2, 2013 - Aragtiyood	Ciidamada boliiska Kenya ayaa billaabay baaritaanno dheeraad, oo lagu ogaanayo xaaladda dadka Soomaalida iyo Keenyaanka kale ee jooga magaalooyinka waa weyn ee wadanka Kenya, xilli ay soo dhawdahay mudadii lagu ballamay doorashada dalka Kenya.
Saraakiisha Ciidamada Kenya ayaa sheegay in heegan buuxo ay ciidanku gali doonaan inta laga meel marinayo doorashada ka dhaceysa dalka Kenya bisha March afarteeda sanadkan 2013.
Taliye sare oo ka tirsan ciidamada Kenya General David Kimaiyo, ayaa warbaahinta u sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la xoojiyo ammaanka maagalooyinka inta lagu jiro waqtiga doorashada oo laga cabsi qabo in kooxda Al-shabaab ee Soomaaliya ay geysato weerarro argagaxiso.
“Waxaanu leenahay, istaraatiijiyad ballaaran oo aanu meel gaar ah u dhigeyno amaanka kaliya doorashada maahan laakiin waxaanu eegi doonaa amaanka wadanka” ayuu yiri General David Kimaiyo.
“Waxaan aad u hubaa in labada bil ee soo socota ay keeni doonaan goob jawi deganaan ah oo ay kamid yihiin horumarka ciidamada iyo ilaalinta goobaha cod bixintu ay ka dhaceyso” ayuu sii raaciyay Mr. Kimaiyo.
General David Kimaiyo, ayaa siyaasiyiinta iyo muwaadiniinta Kenya ugu baaqay inay caawiyaan ciidamada baleyska si aanu amaanka faraha uga bixin, isagoo werwer ka muujiyay nidaamka ururrada oo aad ugu milmay qabyaaladda.
Dadka siyaasadda falaanqeeya ayaa rumeysan in kooxda Al-shabaab ay Kenya ka geysan doonto weerarro aar gudasho ah inta la gu guda jiro doorashada ka dhici doonta wadanka Kenya.
Sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in isku dhac ay dhaliyaan dadka kala raacsan madaxweyne Kibaki iyo ra’isal wasaare Odinga, waxaana la xasuustaa doorashadii 2007 ka dhacday Kenya rabshad ka dhalatay inay ku dhinteen 1,300 oo ruux halka 180,000 oo kale ay barakaceen.
Xafiiska wararka Idacada STN Ee kenya